Dowladda oo in ka badan hal bilyan ku taageereysa dhallinyarada | Star FM
Home Wararka Kenya Dowladda oo in ka badan hal bilyan ku taageereysa dhallinyarada
Dowladda oo in ka badan hal bilyan ku taageereysa dhallinyarada
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa maanta shaaciyay in maamulka talada wadanka haya ee Jubilee uu dhaqaalaha da’yarta ku taageeri doono lacag dhan 1.3 bilyan oo shilin.
Waxaa uu hoosta ka xarriiqay in 900 oo milyan oo lacagtan ka mid ah la siinaya 250 dhallinyaro ganacsato ah.
Sidoo kale hoggaamiyaha wadanka ayaa shaaciyay in gudaha dalka ay hadda ka jiraan 189 xarumood oo ku yaalla deegaannada oo loogu talagalay wax soo saarka.
Mr. Kenyatta ayaa intaa ku daray in ay jiraan 150 xarumood oo ah kuwa awood siinta dhallinyarada.
Goobahan ayuu sheegay in ay leeyihiin adeegga intarneetka oo lacag la’aan ah oo ay dhallinyarada tagi karaan si ay uga shaqeystaan .
Mr. Kenyatta ayaa sheegay in la xaqiijin doono in dhammaan 290-ka deegana baarlamaneed ee wadanka xarumahan laga hirgeliyo.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa soo hadal qaaday faa’iidooyinka laga dhaxlaya meel marinta BBI isagoo xusay in dhallinyarada ganacsiga ku biiraya aan muddo 7 sano ah wax canshuur ah laga qaadi doonin.
Arrimahan ayuu ka hadlay xilli uu maanta guddoomiyay munaasabad ku saabsanayd soo bandhigidda guulaystayaasha tartanka qorshaha ganacsi ee MbeleNaBiz iyo xarig ka jarka qorshaha istaraatiijiga ee sanduuqa dhallinyarada ee 2020 ilaa 2024-ka.
Next articleDHAGEYSO:Hindise sharciyeedka BBI oo laga ansaxiyay Kericho iyo Wajeer